सेक्सबारे सोधियो प्रश्न, न्यूजिल्याण्डकी प्रधानमन्त्रीले दिइन् यस्तो रोचक जवाफ — Imandarmedia.com
सेक्सबारे सोधियो प्रश्न, न्यूजिल्याण्डकी प्रधानमन्त्रीले दिइन् यस्तो रोचक जवाफ
काठमाडौ। संसारका थुप्रै देश कोरोना महामारीका कारण नराम्रोसँग प्रभावित भएको छ। यस्तोमा न्यूजिल्याण्डकी प्रधानमन्त्री जेसिन्डा अर्डर्नले यो विश्वव्यापी महामारीसँग जसरी जुधिरहेकी छिन्, यसका लागि उनको प्रशासनको व्यापक चर्चा भएको छ। हालै उनले कोरोना कालको विषयमा एउटा पत्रकार सम्मेलनको आयोजना गरिन् । यहाँ सोधिएको एउटा प्रश्नका बेला उनको अनुहारको भाव यसरी फेरियो कि त्यो सोसल मिडियामा चर्चाको विषय बन्यो ।
पत्रकारले सोधे यो प्रश्नः न्यूजिल्याण्डकी प्रधानमन्त्री जेसिन्डा अर्डर्न र डायरेक्टर जनरल अफ हेल्थ डा. एश्ले ब्लूमफिल्ड कोभिड–१९ को विषयमा पत्रकार सम्मलेनमा जानकारी दिइरहेका थिए । यतिबेला उनलाई एक पत्रकारले सोधे, ‘अकल्याण्ड अस्पतालमा एक बिरामी र उनलाई भेट्न आएका व्यक्तिले यौन सम्बन्ध स्थापित गरेको आरोप छ । हालको स्थितिमा के यसलाई उच्च जोखिमयुक्त क्रियाकलाप मान्न सकिन्छ ?’
प्रधानमन्त्रीको प्रतिक्रिया भाइरलः यो प्रश्न सुनेपछि जेसिन्डाको अनुहारको भाव निकै फेरियो । उनको फेरिएको भाव सोसल मिडियामा भाइरल हुनथाल्यो । यस्तै डाक्टर ब्लूमफिल्डले यो प्रश्नको जवाफ दिँदै भने, ‘मलाई लाग्छ, यो उच्च जोखिमयुक्त गतिविधि हुनसक्छ । यद्यपि, मलाई यो घटनाबारे खासै जानकारी छैन ।’
त्यसपछि प्रधानमन्त्री अर्डर्नले जवाफ दिँदै भनिन्, ‘मलाई लाग्छ कि कोरोनाको स्थितिलाई यदि किनारा लगाउने हो भने पनि यस्तो कुनै पनि गतिविधि अस्पतालमा बिरामीलाई भेट्न आउँदा गर्नु हुँदैन ।’
यसैकारण पनि चर्चामा रह्यो न्यूजिल्याण्ड सरकारः स्मरण रहोस्, अकल्याण्ड जिल्ला स्वास्थ्य बोर्डले अत्यधिक आलोचनाको सामना गर्नुपरेको छ किनभने बोर्डले सयौं मानिसहरुलाई अस्पताल गएर बिरामी भेट्ने अनुमति दिएको थियो जबकी शहरमा कडा लकडाउन लागू गरेको थियो । यसअघि न्यूजिल्याण्ड सरकार अगस्ट महिनामा निकै चर्चामा आएको थियो जब यो देशमा एकजनामात्रै संक्रमित हुँदा पनि लकडाउन लागू गरिएको थियो ।
३५ वर्षमा १६ करोड बचत, महिलाले अपनाइन् यस्तो तरिका : लुगा नकिनेर र महँगो होटलमा खाना नखाएर १६ करोड रुपैयाँ बचाउन सकिँदो रहेछ । यो कहानी एक यस्ती महिलाको हो जसले फजुलखर्च नगरेर १० करोड रुपैयाँ जोगाएको र ३५ वर्षको उमेरमा नै कामबाट अवकाश लिएको दाबी गरेकी छिन् । यी महिलाको नाम केटी डोनेगन हो । पछिल्लो दुई वर्षदेखि केटी आफ्ना श्रीमान् एलनसँग थुप्रै विदेशको भ्रमण गरिरहेकी छिन् ।
केटी डोनेगनले ‘द सन’ सँगको कुराकानीमा आफूलाई सानैबेलादेखि फजुल खर्च गर्न मन नपर्ने बताइन् । उनले भनिन्, ‘हामीसँग साधारण जीवनयापनका लागि पैसा थियो तर विलासी तरिकाले बिदा मनाउन वा महँगो होटलमा खाना खाने पैसा थिएन । म सधैं आफ्नो ‘पकेट मनी’ बचाउँथे । यो पैसा खर्च गर्नभन्दा पनि बढेको देखेर खुसी हुन्थेँ ।’
सस्तो ठाउँमा खाना खाइन् र पैसा जोगाइन्ः
केटी डोनगनले थपिन्, ‘सुरुमा मैले ९ पाउन्ड प्रति घण्टाको हिसाबले काम गरेँ। त्यसपछि जनवरी सन् २००५ मा कोस्टा रिका गएँ र त्यहाँ एलनसँग भेट भयो । त्यसपछि पुनः म पढ्नका लागि यूके गएँ, त्यति नै बेला मैले फजुलखर्च रोकेँ, नयाँ कपडा किनिनँ, सस्तो रेष्टुरेन्टमा खाना खाएँ र कसैबाट पनि ऋण लिइनँ। सन् २००८ मा ग्रेजुएशनपछि हामी ह्याम्सफायरस्थित एलनकी आमाको घरमा बस्न थाल्यौं । यसो गरेर हामीले घरका लागि पैसा जोगाउन सक्थ्यौं । त्यतिबेला मैले वार्षिक २८,५०० पाउन्ड कमाउँथे । एलनका आम्दानीका विभिन्न स्रोत थिए ।
उनी अध्यापनसमेत गर्दथे । ‘हामीले प्याक गरिएका खाना खायौं, सेकेन्ड ह्यान्ड स्कोडा चढ्यौं र महँगो नाइटआउटमा जानुको साटो साथीहरुलाई घरमा नै बोलायौं । हामीले धेरै पैसा बचत गर्न सफल भयौं र सन् २०१० को नोभेम्बरमा १६७,६५० पाउन्डको दुई बेडरुम फ्ल्याटको लागि ४२,००० पाउन्ड एडभान्स तिर्न सफल भयौं । हामीले सन् २०१३ मा विवाह गर्यौं । यसका लागि सामुदायिक भवन बुक गर्यौं, इमेलमार्फत् निम्तो पठायौं, साथीहरुले विवाह स्थल सिँगारे र निकै कम खर्चमा विवाह सम्पन्न भयो । ’
‘सन् २०१४ मा थुप्रै पटक प्रोमोसन भएपछि मैले ५८,००० पाउन्ड कमाइरहेकी थिएँ । यो रकम ठूलो थियो तर म आफ्नो भ्रमणलाई कम नै राख्ने कुरामा दृढ थिएँ । एलनले वार्षिक ६३,००० पाउन्ड घर ल्याउँथे । हामीले मासिक ३ हजार पाउन्ड बचत गर्ने गर्दथ्यौं ।’ सन् २०१५ मा मैले FIRE (Financial Independence, Retire Early)​ पढेँ । यसमा आफ्नो भ्रमणलाई सकेसम्म कम गरिन्छ र आफूले सकेजति बचत गरिन्छ । मैले आफ्नो बचत सेयरमा लगानी गरेँ र अन्त्यमा बचतबाटै कमाई गर्न थाल्यौं ।’
‘त्यतिबेलासम्म हामीले २९१,००० पाउन्ड बचत गरेका थियौं । एलनले सन् १९९६ देखि बचत गरिरहेका थिए र मैले भने आफ्नो स्नातक पछि उनलाई यसमा सहयोग गरेँ । त्यसपछि हामीले ३ वर्षभित्र १ मिलियन पाउन्ड जम्मा गरिसक्ने योजना बनायौं ताकि अवकाश लिन सकौं ।’
‘हामीले खासमा काम मननपरेका कारण अवकाश लिन चाहेका थिएनौं । यसमा आर्थिक स्वतन्त्रता र गुणस्तरीय जीवन समेटिएको थियो । थप पैसा कमाउन मैले आफ्नो जागिर छोडिदिएँ र कन्ट्र्याक्टरको रुपमा काम गर्न सुरु गरेँ । कति साथीहरुले हामीलाई पागल भन्थे । हामीलाई पुरानै फ्ल्याट र कारमा टाँस्सिरहेको देख्दा उनीहरुले यसो भन्ने गर्थे तर हामीले स्टक मार्केटमा कसरी लगानी गर्ने भनेर पढ्यौं ।’
सेप्टेम्बर सन् २०१८ मा हामीले लगानी र बचत गरी ८९८,००० जम्मा गर्न सफल भएका थियौं । त्यतिबेलासम्म पनि हामीले हाम्रो १ मिलियन पाउन्डको उद्देश्य प्राप्त गर्न सकेका थिएनौं । तर मार्च र अप्रिल २०१९ मा हाम्रो सम्पत्तिमा ४६,००० पाउन्डको वृद्धि भयो । यसको अर्थ हामीसँग अब अवकाश लिन पर्याप्त रकम थियो । ’ काम नगर्ने मेरो निर्णयलाई एलनले साथ दिए । उनले पूर्ण अवकाश लिने सोच बनाएका छैनन् । उनले आफ्नो व्यापार बढाउने सोच बनाइरहेका छन् तर दैनिक काममा भने उनी सहभागि हुँदैनन् ।’
‘त्यसपछि हामीले हाम्रो फ्ल्याट भाडामा लगाउन पायौं । हामी फिरन्ते जीवनमा रमाउन पायौं । थाइल्याण्डदेखि मेक्सिकोमा साइक्लिङ, हाइकिङ गर्न पायौं र आफूले आफैंलाई फिट राख्न पायौं । कोभिडको कहर सुरु हुँदा हामी न्यू ओर्लिन्समा थियौं । यसकारण हामीले केही समयका लागि आफ्नो भ्रमण स्थगित गर्नुपर्यो । त्यसपछि सन् २०२० मा हामी बेलायत फर्कियौं ।’
यी महिला, जो ४० वर्षदेखि निदाएकी छैनन्
हामी कतिबेरसम्म नसुतिकन बस्न सक्छौं ? अधिकतम २४ घण्टा ? यो पनि धेरैले सक्दैनन् । तर एक महिलाले आफू विगत ४० वर्षदेखि नसुतेको दाबी गरेकी छन् । चीनकी यी महिलाको यो दाबी चिनियाँ मिडियाले प्रकाशित गरेका छन् ।
चीनको हेनान प्रान्तकी ली झानयिङ्गले आफू ४० वर्षदेखि नसुतेको दाबी गरेकी हुन् । उनको यो दाबीलाई उनका श्रीमान् र छिमेकीले पुष्टि गरेका छन् । आफू ५ वा ६ वर्षको हुँदा अन्तिम पटक निदाएको उनलाई स्मरण छ । अहिले उनी ४५–४६ वर्ष पुगिसकेकी छिन् तर निद्रा लीका लागि पुरानो स्मृति बनेको छ । ली आफ्नो समुदायका लागि एक सेलिब्रिटीजस्तै बनेकी छिन् ।
दिउँसो र रातैभरी नसुतिकन बस्न सक्ने भएकोले उनलाई धेरैले ‘अचम्मको व्यक्ति’ को रुपमा हेर्ने गर्छन् । अडिटी सेन्ट्रलका अनुसार केही वर्षअघि उनको दाबी परीक्षण गर्न उनका केही छिमेकीले रातको समयमा तास खेल्न उनलाई चुनौती दिए, चुनौती दिनेमध्ये कोही घर गए भने कोही त्यतै निदाए तर उनी भने जागा भइरहिन् ।
लीका श्रीमान् लिउ स्वोक्विनले पनि उनकी श्रीमती फिटिक्कै ननिदाउने कुराको पुष्टि गरे । विवाह भएदेखि नै श्रीमतीले दिनभरी, रातभरि घरको काम गरिरहने उनले देखे । लिउ चकित भए र श्रीमतीलाई यसबारे सोधे पनि । लीले आफ्ना श्रीमानलाई आफू निदाउनै नसक्ने कुरा पनि बताइन् ।त्यसैले उनका श्रीमानले श्रीमतीलाई निद्रा नलाग्ने केही समस्या भएको होला भन्दै निद्रा लाग्ने औषधि किनेर ल्याइदिए तर त्यसले पनि काम नगरेको उनले बताए । बास्टिल पोस्टकाअनुसार लि झानयिङ्ले यसका लागि थुप्रै पटक अस्पताल पनि धाइन् तर डाक्टरले शंका गर्नुपर्ने खालको कहिल्यै केही भेटेनन् ।
यद्यपि, बेइजिङको मेडिकल सेन्टरमा गएपछि भने उनको दशकौँ लामो समस्यामा अन्ततः बिराम लागेको छ । डाक्टरको एउटा समूहले उनलाई उन्नत सेन्सर प्रयोग गरेर ४८ घण्टासम्म निगरानी गरे । निगरानीपश्चात् थाहा भयो कि उनी खासमा निदाउन त निदाउँछिन् तर अरु जसरी भने निदाउँदिनन् ।४८ घण्टासम्म गरिएको ब्रेनवेभ निगरानीको क्रममा संकलन गरिएका तथ्याङ्कले ली सामान्य मानिसझैं आँखा बन्द गरेर बेडमा लम्पसार परेर पल्टिएका बेला मात्रै निदाउँदिनन्, उनी श्रीमानसँग कुरा गरिरहेका बेला पनि निदाइरहेको हुने पत्ता लाग्यो । डाक्टरले उनको यो अवस्थालाई ‘उठिरहेका बेला पनि निदाउने’ नाम दिए । यतिबेला लीका केही स्नायु र अंग सक्रिय नै रहेको पाइयो ।
डाक्टरका अनुसार लीलाई वास्तवमा उनकै दिमागले धोका दिएको थियो । जब उनी आराम गरिरहेकी हुन्थिन्, उनको शरीरका केही अंग निष्क्रियतामा प्रवेश गरिसकेका हुन्थे तर यसका लागि उनलाई आफ्नो आँखा बन्दै गर्नुपर्ने आवश्यकता भने थिएन । आफ्नो शरीर र मष्तिष्कलाई आराम दिने आफ्नो असामान्य तरिकाका कारण लीलाई लाग्यो कि उनी ४० वर्षदेखि निदाएकी नै छैनन् । उनी हरेक दिन आँखा चिम्लेर १० मिनेटभन्दा बढी समय बिताउँदिनन् त्यसैले उनी प्राविधिक रुपमा सही पनि छिन्।